Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguSylvain
I-Cottage ene-1 yokulala inikezela ngesakhelo sokuzonwabisa kunye nokuzonwabisa kwe-languid phantsi kwelanga leProvencal: imizuzu eyi-10 ukusuka eSaint Rémy De Provence, imizuzu emi-5 ukusuka eMaussane Les Alpilles.Ifumaneka kwenye yeedolophana ezintle kakhulu eFransi. I-Cottage inombono omangalisayo weChâteau des Baux. Ineehektare ezi-6 zepaki efihlwe kwiiAlpilles, phakathi kwezidiliya kunye nemithi yomnquma. Ipaki ityalwe ngemithi yeMeditera, umnquma, lavender, umsipres.
I-Cottage, enebhedi yobukhulu be-One Queen (140 cm), kunye nesofa eguqukayo, inayo
igumbi lokuhlambela elinye elineshawa, isinki ephindwe kabini, indlu yangasese kunye neKitchenette (ifriji, iihotplates, umenzi wekofu), i-air conditioning.
Indlu enkulu kunye ne-cottage ibekwe phakathi kwezona zidiliya zibalaseleyo zeLes BAUX de Provence kunye neLali. Ujikelezwe ziihektare ezi-7 (iihektare eziyi-17.3) zemithi yomnquma, kunye nemithi ye-mediterraneen, imithi yeziqhamo, uya kufumana indawo ezolileyo nenoxolo ngokupheleleyo kwindawo yakho yokuhlala.
Ndingumntu ophethe indlu ne cottage. Ndiyalwamkela undwendwe lwam, okwangoku sabelana nge "Aperitif" emnandi kunye. Ndibanike izitshixo ne remote ye main gate. Ndidla ngokudibana nabo kube kanye ngemini ukuze ndiqinisekise ukuba yonke into ihamba kakuhle, nokuba bonwabile. Ucango lwam luhlala luvuliwe , bangafika nanini na bazondibuza ukuba bafuna ntoni.
Ndingumntu ophethe indlu ne cottage. Ndiyalwamkela undwendwe lwam, okwangoku sabelana nge "Aperitif" emnandi kunye. Ndibanike izitshixo ne remote ye main gate. Ndidla ngokudibana n…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Les Baux-de-Provence